Indlela Izikhangibavakashi Ngokuphepha Phakathi coronavirus Outbreak | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Indlela Izikhangibavakashi Ngokuphepha Phakathi coronavirus Outbreak
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 26/09/2020)
Coronavirus kokugqashuka bekulokhu imbangela enkulu wabonisa ukuthi uyabakhathalela abantu emhlabeni wonke, kodwa mhlawumbe omunye nezindaba enkulu wukuthi abahambi ebhekene. Ngenxa kumacebo kunzima ukushintsha namathikithi ngokuvamile kakade ibibhukelwe, kungase kwenze umqondo ngawe ukuqhubeka izinhlelo zakho esikhundleni ukukhansela. Uma ukhetha ukwenza kanjalo, ukusizakala la mathiphu ukuqinisekisa ukuthi uhamba ngokuphepha phakathi coronavirus kokugqashuka bese uthola zonke Corona izibuyekezo zakamuva.
Isithuthi somzila Ingabe I nokunobungane nephephile Way Izikhangibavakashi. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Gcina Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Okokuqala, Kanti ziyini ngempela coronavirus? Kuyinto uhlobo igciwane yakhiwa ezifweni zokuphefumula njengoba Middle East zokuphefumula Syndrome (MERS) futhi okukhulu sibi zokuphefumula syndrome (SARS). Coronavirus yalomnyaka inoveli ngokuthi COVID-19, futhi kukholwa ukuthi wayedabuka esifundazweni Hubei lwase China, emzini Wuhan. Kuyinto Isifo esithelelana izimpawu zomkhuhlane-like nge, kuhlanganise imfiva, Umphimbo obuhlungu, ukukhwehlela, futhi amakhala yisisu. Njengoba abokuqala ekunakeni ngoJanuwari, isifo sandile yonkana enkulu ye-Asia nakuzo zonke izindawo ababezazi emhlabeni, amazwe ezithinta ezifana Japan, INingizimu Korea, Italy, I-the united states, nase-Iran. Lokhu kuye kwabangela imikhawulo travel noma travel advisories ezindaweni eziningi, Nokho abaningi zisekhona iphila iminyaka yokuhamba.
Indlela Izikhangibavakashi Ngokuphepha Phakathi coronavirus Outbreak?
Ngenkathi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uye waxwayisa travel ezingabalulekile ukuze kulawo mazwe zithinteka kakhulu kakhulu, ingxenye enkulu yomhlaba is ebona kungagcini, uma ikhona amacala. I World Health Organization uye uthathwa COVID-19 Ukukhathazeka Public Health eziphuthumayo International kunokuba ubhubhane, okuyinto izindlela ungagcina ku nalabo izinhlelo travel uma uku ngokucophelela. Vele unakekele kakhulu ukuze ulondoloze impilo yakho usebenzisa lezi amathiphu:
Ithiphu 1: Thola Zonke Imithi yakho
Nakuba lokhu kungase kubacacele, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uthola yonke imithi yokugoma ngaphambi kokuba uqale ikhambo lakho. Ukuze uthole ukuthi yini izithombe ozozidinga ngaphambi uya, hlola website CDC ukuze uthole ulwazi lwezempilo. Ukwenza uqiniseke ukuthi bavikelekile njengoba izifo eziningi ezingase zivinjelwe ngangokunokwenzeka kuyisihluthulelo ukugcina izivikeli mzimba zakho eqinile.
Ithiphu 2: Letha magciwane Wipes
Ezinye nokuqubuka okubi kakhulu ziye zabonakala ezindaweni nabantu oxhumana nabo eduze, ezifana yedwa Diamond Princess cruise umkhumbi Japan, okuyinto izinsalela usufikile ngaphandle nje Tokyo. Uma nabo babehamba phakathi nabanye abantu abaningi, ezifana ebhanoyini, kube Qiniseka ukugcina endaweni yakho ihlanzekile. Letha futhi usula elwa namagciwane kanye ukuhlanza indawo yakho uma ufika. Lokhu kuhlanganisa esesula yokubeka yakho, cupholders, amatafula ugqoko kanye kunoma iyiphi indawo ukuthi uzokhokhiswa bangazihluphi.
Ithiphu 3: Gcina Your Hands Hlanza If You Want To Ichibi Ngokuphepha Phakathi coronavirus Outbreak
Nakuba abantu abaningi uzama yokugqashula igciwane nge face buso, empeleni, odokotela bathole labo kuncane kakhulu abakwenzayo lutho uphila. Kunalokho, ukugeza izandla kaningi is wayithola iphumelela kakhulu ekuhlaleni uphilile. Uma uhamba endaweni ethile lapho ngeke njalo bakwazi ugeze izandla zakho, ukuletha olunoketshezi lokuhlanza izandla esikhundleni futhi ulisebenzise njalo.
Kulesi efanako, ugcine izandla zakho ebusweni bakho, futhi emlonyeni wakho namehlo. Lawa izindawo ephakeme ingozi ngawe ukuba uthole isifo.
Ithiphu 4: Thola Izikhangibavakashi Umshwalense
Uma uku-US-based, amaningi wesikweletu ninikeza esakhelwe wokuvakasha, Nokho uzodinga ubuze okhipha ikhadi lakho ukuze ubone ukuthi entsha coronavirus kokugqashuka imbozwe. Kubo bonke abanye abantu, Nokho, uzodinga umshwalense ukuthenga travel uma amacala ukuqinisekisile of igciwane uqale ziyavela futhi lisakazeka ezweni lakini ikhambo.
Le tip futhi kudlulela travel okhokhelwa, ezifana amathikithi esitimela, amahhotela, futhi izinkambo. Nakuba-ke zingakubiza sikubeke sobala ngokwengeziwe ukuthi incwadi, unenkululeko kokuba okhokhelwa kumacebo ongakhokhela off enkulu uma yokukhansela.
Ithiphu 5: Stay Away From Izixuku!
Ochwepheshe bezempilo baye baxwayisa ngokuthi leli gciwane lisakazeka kanjani nge contact umphakathi, okuyinto indlela okufanele uhlale kude izindawo aminyene ngangokunokwenzeka. Lokhu kunciphisa ukuvela kwakho abagulayo. Kunjalo, izivakashi musa bathambekele ukuheha izixuku, kodwa kufanele usazokwazi ukuvakashelwa ngesikhathi ezishibhile nezikhathi lapho izivakashi ziphansi. Ezindaweni ezifana Paris, lokhu kungase kusho ngokuvakashela Louvre at wokuvula Museum noma ngaphambi nje kokuba uvale esikhundleni phakathi nosuku lapho iphakama traffic izivakashi.
Kunjalo, kungase kungenzeki nhlobo ukugwema izixuku ngokuphelele, ikakhulukazi imikhosi. Nakuba ingxenye enkulu yeYurophu uye okulokhu ukhansele imikhosi efana Carnivale Italy futhi ngisho Expo Hambayo World Congress e-Spain.
Ithiphu 6: Zinakekele
Izikhangibavakashi kumatasa, sonke siyazi ukuthi. Nokho, uhlobo ngesivinini ekuhambeni ikhambo akusho ukuthi udinga ukusebenzisa ngokwakho Ragged. Kungase kuzwakale ziyakhanga ukuze uvuse ngesikhathi kuqhuma sekusile amabombo out kwaze kwaba ngemva kwamabili, kepha kubalulekile ukuze wenze isiqiniseko sokuthi zinakekele phakathi wonke fun. Kungani? Ngenxa ulala ngokwanele futhi ukudla okunempilo kusho umzimba wakho kungaba okuzivikela ezifweni. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi kulabo ziyashesha kakhulu izifo, ezifana asebekhulile noma abagula ngendlela sakhiwe mzimba izinhlelo.
Izikhangibavakashi Ngokuphepha Phakathi coronavirus Outbreak – Iphuzu Eliyinhloko
Nakuba kukhona ngokuqinisekile azizwa ngayo ngalabo ibibhukelwe travel phakathi nalesi sikhathi, kunezindlela ngawe ukuhamba ngokuphepha phakathi coronavirus kokugqashuka. I COVID-19 ezithathelwanayo, kodwa emazweni amaningi azikakabi abathintekayo futhi isaphephile ukuhamba. Uma uhlela ukuqhubeka ngeholide lakho, sebenzisa la macebiso ukuze uzigcine enempilo. Qiniseka ukuthi ukulala ngokwanele futhi udla kahle, uthole wonke ngemigomo yakho edingekayo, ukuhlanza izindawo okuzungezile nge magciwane, bese ugcine kumacebo wakho nezimo. Thenga wokuvakasha futhi Gwema aminyene nezindawo ngangokunokwenzeka, futhi ngaphezu kwakho konke ugcine uyazi. Hlala wena ngempela uzilungiselele uma coronavirus ukuqubuka vela ezweni lakho.
Enye yezindlela ezingcono kakhulu ukuhamba ngokuphepha phakathi kokugqashuka coronavirus nge isitimela – ujabulele lula nokuphepha yohambo ngesitimela nokusetshenziswa Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Indlela Izikhangibavakashi Ngokuphepha Phakathi coronavirus Outbreak?” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/travel-safely-coronavirus/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)